Soafara • rapgasy.mg
Anarako, RABEMILA Soafara …
Io fanampin’anarana io no ahafantaran’ny Rap fianakaviana ny tenako. Misy ihany koa miantso ahy hoe VY
Momba io solon’ anarana io no tiako asiana fanazavana kely satria betsaka no manontany ahy hoe : »Fa maninona no hoe Vy? »
Raha tiana aharitra ny Construction iray ohatra hoe trano, fanaka na fitaovana samy hafa dia mampiasa vy. Io karazana akora io dia maharitra tokoa ary tena ela vao rava tanteraka ra hay ny mikojakoja azy. Ary farany, raha ny teny frantsay no angalana ny dikany dia hetiko itenenana hoe Vié : fiainana.
Rehefa nitia RAP sy ny discipline Hip Hop nandritry ny fotoana ela ela dia tapa-kevitra fa andray micro tamin’ny taona 2000. Tamin’izany Soafara tao anatin’ny tarika Zanatany izay efa tsy misy intsony ankehitriny, efatra izahay no nandrafitra azy io tamin’izany.
Avy eo moa rava ilay tarika fa ny mpikambana kosa mbola nifandray.
Tamin’ny taona 2005 kosa dia nangataka tamin’ny mpikambana iray tao amin’ny Sakina Fray ny tenako hanatevin-daharana ka nanaiky ny fangatahako izy.
Hatramin’izao aho dia mbola ao. Na dia tsy mamoaka hira intsony aza izahay dia ao anatin’ny fonay hatrany io tarika io.
Tamin’ny taona 2007 dia tafiditra ho isan’ny mpikambana tao amin’ny Otentika Connexion indray ary mbola ao ihany atramin’izao.
Tsy nisafidy gadona hafa afatsy ny Rap satria io no tena hitako fa ahafahako mikikiaka ny tiako ambara rehetra, anisan’izany ny tsy fitoviana tsapako eto amitsika amin’ny lafiny rehetra. Io ihany koa no anisan’ny loha-hevitra tiako resahina foana satria mbola tsapako io trangam-piaraha-monina io fa tsy nisy fiovana, vao maika aza miha-ratsy.
Tsy misafidy instru aho raha koa ka mbola tsy manitsaka ny principe-ko ao anaty Rap izany ary resy lahatra ihany koa aho fa ny mozika Rap dia velona ka mety hisy hatrany ny fivoarana ao anatiny.
Hatramin’izay dia mbola tsy sahy nandeha irery aho ka hoe anao hira iray ahy manokana. Tsy sahy satria tsy aiko izay mety ho tsirony.
Tamin’ny taona 2015 dia namoy ny raiko aho ka dia nandeha ho azy ny tanako nanoratra ho azy (Antso Ho Anao) . Nanomboka tamin’io dia miheritreritra amin’izay ny hanoy SOLO.
Tena tiako ny miara miasa amin’ny mpanao Rap hafa na vaovao na efa ela, any ka sarotra ho ahy ny mandaha featuring raha misy mangataka ny ho amin’izany ary raha toa ka mifanojo amin’ny fahafahako ihany koa, resaka fotoana io …
Aloky ny tsy Fitiavana
Ti-Ah Feat Takodah & Ngah B
Taloha sa Ankehitriny Mason'Aloka 301 feat Otentika Connexion &nbs...
Ditsoka – Buddha el... Buddha el Taga feat Nicole
Fanevan’ny Ambany T... TANGALA MAINTY
Ny Hasin’ny Maha-Olona
LAY feat M.A.P
Jento & Laz
Live CHRISTIAN HIP HOP / BLESS UP
Tafatafa niarahana tamin’i Tanjona ANDRIAMAHALY mpiarakara ilay hetsika Bless Up
Nifandona tamin’ireo mpikambana ao amin’ny Groupe Maizin’Andro. Ka nakana feo i Ramijah...
Nifampitafa tamin’ny Mpikarakara ny Hetsika SEKOLY TALOHA Edition Clan. Hetsika tamin’ny 08...
Affichage du Contenu en 1,539,882,029.108 seconde(s) avec 92 requêtes SQL